လေနုအေး: သားနဲ့ ဘာသာရေး
Posted by တန်ခူး at 4:43 PM
တကယ်ကို ရင်ကိုထိရှ ခံစားရတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ။
မြန်မာ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိဘတော်တော်များများဟာ သားသမီးကို ဘာသာတရားနဲ့ ယဉ်ပါးစေချင်ကြသော်လည်း ကိုယ့်သားသမီး သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်သွားမှာကို စိုးရိမ်တတ်ကြတာကို သတိထားမိတယ်။ (ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ ... မိဘတွေ ဘာကိုစိုးရိမ်တယ် .. ဘာကြောင့် စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာလည်း ခံစားနားလည်လို့ ရပါတယ်။)
ကြားရတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ.. မမတန်ခူးရေ
ဒီစာဖတ်ရတာ ကျက်သရေရှိလိုက်တာ အမရာ
မတန်ခူး သားသားက ပါရမီရှင်ပဲ။
ဒီအရွယ်လေးနဲ့ ဘာသာရေးကို သိပ်စိတ်ဝင်စားတာ ထူးခြားတယ်။
ကြီးလာလို့ သူ ဘုန်းကြီးဝတ်မယ်ဆိုလဲ အမလဲ ရဟန်းမယ်တော်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ ဆရာဝန်ရဲ့ အမေ အင်ဂျင်နီယာရဲ့ အမေဆိုတာထက် ရဟန်းမယ်တော်ဖြစ်ရတာ ပိုပြီးကျေနပ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေက ဘုရားဂုဏ်တော် တရားဂုဏ်တော် သံဃာ့ဂုဏ်တော်တွေကို ကလေးတွေ မှတ်မိလွယ်အောင် ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေး သားသားအတွက် ပေးရအုံးမယ်။
good good, in sg environment this kind of attitude is rarely find.ama so lucky... proud of u...
အမပီးတော့ ကမ္ဘာအေးက ထုတ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် ကဗျာလေးတွေနဲ့ဗုဒဘာသာယဉ်ကျေးမှုစာအုပ်လေးတွေလည်းရှိတယ်။ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ မိဦးဖဦး.ဆရာ့ဦးကို ခူး၍အလျှင်မစားနှင့်တို့ဘာတို့။
တေ.ဇ.သူ.နေ.မ.ဘူ.စန်.ဒါ.၀ိ.ဝေ..ဆိုပီး သားကို အမပြောတဲ့ပုံပြင်တွေနားထောင်ချင်တယ်တော့..
သားသားက ပါရမီ ထူးသူပေပဲ
မတန်ခူးရေ.. ၅၅၀ ဇာတ်တော် ပီဒီအက်ဖ်ဖိုင်လ် ရှိပါတယ်. လိုချင်ရင် ပို့ပေးပါ့မယ်.. အီးမေးလိပ်စာလေးသာ ပေးပါနော်..
သားလေးက ဒီအရွယ်လေးနဲ့ ဒီလောက်သဘောပေါက်နားလည်နေတာ....နည်းတဲ့ပါရမီဥာဏ်မဟုတ်ဘူးနော်....။ သားလေးအတွက် ဝမ်းသာပါတယ်အစ်မရေ...။
သားသားပုံလေး လာကြည့်တယ် မ-ရေ။ လူကြီးလေးကျနေတာပဲ စာတွေဖတ်လို့။ :)
ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ကို အဖေစပ်ထားတဲ့ ကဗျာ (သီချင်း) လဲ ရှိသေးတယ်။ အားရင် ပို့စ်တင်ပေးမယ် သားသားအတွက်။
သားလေး ရဲ့ အဲဒီလို တိုးတက်မူ ဖြစ်စဉ် ပြောင်းလဲ လာမူလေးတွေကို..မြင်ရတာ..စိတ်ဝင်စားစရာပဲ..
ကျမ တူလေး ၅ နှစ်သား ကတော့.. သင်္ကန်းမစီးချင်ဘူး..စစ်သားတွေ ဖမ်းမှာ ကြောက်လို့ တဲ့.. မရယ်..း(
မနေ့က လာဖတ်သေးတယ်။ ဒီနေ့မှ သားဓာတ်ပုံလေးတွေ့တယ်။ လိမ္မာလိုက်တာနော်။
နှစ်သစ်မှာ မိသားစုတစ်ခုလုံး ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ..
ပြန်လာပြီဆိုတော့ မ စာတွေပြန်ဖတ်ရတော့မယ်ပေ့ါနော်
ကိုယ့်မျိုးဆက်ကို ဒီလိုဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်နိုင်တာ ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ အမရေ..။ သူ့ စိတ်ဝင်စားမှုက မိဘမပြောနဲ့၊ ဖတ်ရတဲ့လူတောင် ကြည်နူး မိပါတယ်။
တန်ခူးရေ ... သားလေးက ထူးထူးခြားခြား ပါရမီ ပါတယ်နဲ့တူတယ်နော်... စာအုပ်ကိုများ ဖတ်နေလိုက်တာ။ လူကြီးလေးကျနေတာပဲ။
ဇာတ်ကြီးဆယ်ဖွဲ့ကို သမီးလဲကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗမာလို ဖတ်ပြတာကို သူနားမလည်ဘူး။ နတ်ရွာစံတာတို့ ဘာတို့ဆို ဗမာလို ပြန်ရှင်းပြနေရတယ်။ နေ့စဉ်ပြောနေကျစကားတွေပဲ သူတို့ကနားလည်တယ်။ စာသံပေသံတွေ နားမလည်တော့ ဗမာလိုရေးတာကို ဗမာလို ပြန်ရှင်းပြနေရတယ်။
Please buyapussy cat for him sis,
i can't stop loving his talking
သားက မေမေကြောင်လေး မွေးချင်တယ်တဲ့။
ဖတ်ရတာ စိတ်ကြည်နူးလိုက်တာ အစ်မရယ်။ သားလေးကို ချစ်လိုက်တာ။ မြန်မာ့စိတ်ဓါတ်နဲ့၊ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် သားလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်တဲ့ အစ်မတို့ကို တကယ်လေးစားမိပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ အစ်မတို့မိသားစု ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေဗျာ။
မြန်မာနှစ်သစ်ကူး အချိန်မှာ ဒီလိုအကြောင်းလေး ဖတ်ရတာ သိပ်ကျက်သရေရှိတာပဲ အမရယ်။ သားသားက သားလိမ္မာလေး ဖြစ်လာမှာပါ။
ကျွန်တော် ကျောက်မြောင်းက တရားပွဲတစ်ခု တရားနာသွားတုန်းက မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ကောဝိဒ တရားလာဟောတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာတော်ကြွလာတော့ ဆရာတော့်ကားပေါ်မှာ မယ်တော်ကြီးပါ အတူလိုက်လာတယ်။ ဆရာတော့် မယ်တော်ကြီးကို မြင်ရတာ မျက်နှာမှာ ကြည်လင်အေးချမ်းနေတာပဲ။ တော်တော်ကို စိတ်အေးချမ်းသာတဲ့ အသွင်မျိုးဖြစ်နေတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သားတော် သွားဟောရာ တရားပွဲတွေတစ်လျှောက် တရားလိုက်နာရတယ်။ တကာ တကာမတွေကလည်း ဆရာတော့်မယ်တော်ကြီးဆိုတော့ သေချာဦးစားပေး ဂရုစိုက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်ဖြင့် အဲဒီတုန်းက မြင်ရတာ ပီတိဖြစ်လိုက်တာဗျာ။ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်သွားတာကို စာနဲ့ ဘယ်လိုရေးပြရမှန်းတောင် မသိဘူး။
အမရေ သာသနာရေးကို ဒီအရွယ်ကလေးထဲက စိတ်ဝင်တစားလေးရှိဖို့ တလေးတစားရှိဖို့ဆိုတာ
မိဘတွေက အတင်းပုံသွင်းရင်တောင် ဖြစ်လာဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ အမတို့မှာ ပါရမီပါလာတဲ့ သားလေးတစ်ယောက် ရလာတာ အင်မတန်မှကို ကုသိုလ်ထူးတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေတော့။
သားသားဖို့ ကဗျာလေး တင်ထားတာ လာပြောတာပါ။ အသံလဲ ပါတယ်။
သားလေးအကြောင်းဖတ်ရတာ တကယ်ချစ်စရာ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်...
ကိုရင်ဝတ်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ လူတွေကို ဘုရားစာ သင်ပေးမှာ ဆိုတာမျိုး စဉ်းစားတတ်ပုံလေးဟာ တော်ရုံ တန်ရုံ ကလေးတယောက်ရဲ့ အသိလေးနဲ့တော့ မရနိုင်ဘူးနော်....
သားက တကယ့်ကို ထူးခြားမယ့် ကလေးပါပဲ...း))
မရေ... တကယ့်ကို ကြည့်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ။ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ၀မ်းသာမိတယ်။း)
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသား သတင်းလေးက ဖတ်လိုက်ရတိုင်း ကြည်နူးစရာပေါ့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးမှာ မိသားတစ်စုလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ ။
အစ်မရေ မွေးနေ့က ကျော်ခဲ့ပြီဟုတ် အဲ့ရက်ကမရောက်ဖြစ်လို့ ခုမှ ဟက်ပီးဘတ်ဒေး လုပ်လိုက်တယ်နော်း)
လာရောက်ဖတ်ရှုမှတ်သားသွားပါကြောင်း..။ သားကို ဂရုစိုက်ရင်း ပို့စ်တွေလည်း မှန်မှန်ရေးနိုင်ပါစေ။
Thar Thar is so clever!
Just wanted to sharealink of interactive buddhist stories for children: http://www.jatakkatha.com/index.htm
Hope Thar Thar enjoys the stories.
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာပဲ ကြီးပြင်းသွားရမယ့် ကလေးလေး တစ်ယောက်မှာ ဒီလို စိတ်ဓါတ်အခြေခံရသွားတာ အတော်ပဲ ကျေနပ်စရာပါ။ ဘေးကနေ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။